मर्दिखोला शैक्षिक प्रतिष्ठानद्वारा साढे ३ लाख बराबरको छात्रवृत्ती तथा शैक्षिक सामाग्री वितरण – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. मर्दिखोला शैक्षिक प्रतिष्ठानद्वारा साढे ३ लाख बराबरको छात्रवृत्ती तथा शैक्षिक सामाग्री वितरण – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
मर्दिखोला शैक्षिक प्रतिष्ठानद्वारा साढे ३ लाख बराबरको छात्रवृत्ती तथा शैक्षिक सामाग्री वितरण
पोखरा । मर्दिखोला नेपाल शैक्षिक प्रतिष्ठानले कास्कीका विभिन्न विद्यालयलाई शैक्षिक सामाग्री र गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ती वितरण गरेको छ । प्रतिष्ठानको २२औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा करिब साढे ३ लाख बराबरको शैक्षिक सामाग्री तथा छात्रवृत्ती वितरण गरेको हो ।
प्रतिष्ठानले कास्की माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नं. ५ स्थित निष्पक्ष माविलाई ९० हजार बराबरको विज्ञान सामाग्री, पुरन्चौरको विन्देश्वरी माविलाई ४० हजार बराबरको पुस्तक, धम्पुसको उदय माविलाई २० हजार बराबरको पुस्तक र क्रमश धम्पुसको पृथ्वीनारायण मावि, भुजुङखोलाको माछापुच्छ्रे मावि र हेम्जाको विष्णुपादुका माविलाई १०/१० हजार बराबरको पुस्तक वितरण गरेको छ । त्यस्तै कास्कीका विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत गरिब तथा जेहेन्दार १५ विद्यार्थीलाई प्रतिष्ठानले १० हजारका दरले छात्रवृत्ती समेत वितरण गरेको छ ।
कार्यक्रममा माछापुच्छ्रे गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङले विद्यार्थीको आर्थिक अभावले शैक्षिक क्षेत्रमा अगाडी बढ्न नसकेको अवस्थामा प्रतिष्ठानको कामले सहयोग पुगेको बताए । साथै उनले विद्यालयले पाएको सामाग्रीको उच्चतम प्रयोग गरिदिन आग्रह गरे । त्यसैगरि माछापुच्छ्रे गाउँपालिका वडा नं. ५ का अध्यक्ष जुमबहादुर गुरुङले प्रतिष्ठनले गर्ने सहयोगलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरे । त्यस्तै सोही ठाउँको बराह माविका प्रधानाध्यापक नरबहादुर गुरुङले प्रतिष्ठानको प्रशंसा गर्दै प्रतिष्ठानले शैक्षिक क्षेत्रमा मात्र नभई अन्य क्षेत्रमा पनि सहयोग गरिरहेको जानकारी दिए । त्यस्तै निष्पक्ष मावि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पूर्ण गिरीले सहयोग प्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै प्राप्त भएको सामाग्रीको उचित उपयोग गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । निष्पक्ष माविका प्राचार्य दुर्गा बहादुर रावतले विद्यार्थीले विज्ञान प्रविधिलाई चिन्नलाई प्रतिष्ठानको सहयोग प्रति धन्यवाद व्यक्त गरे ।
प्रतिष्ठानका सचिव तथा कार्यक्रमका सभापति डिल्लीराम गिरीले विद्यालयले सामाग्री प्राप्त गरिसकेपछि त्यसको उच्चतम प्रयोग गरिदिन आग्रह गरे । प्रतिष्ठानको सहयोग प्रचारको लागि नभई विद्यार्थीको उज्वल भविष्यको लागि भएको उनले बताए । गत वर्षहरुमा प्रतिष्ठानद्वारा प्रदान गरिएको सामाग्रीको अनुगमनका क्रममा उच्चतम प्रयोग नभएको र कतिपय विद्यालयको सामाग्रीमा माकुराको जालो लागेको देख्दा आफुलाई दुःख लागेको गिरीले बताए । साथै विद्यालयलाई प्राप्त भएको शैक्षिक सामाग्रीबाट विद्यार्थीहरु कति लाभाम्वित भए/भएनन् भन्ने विषयमा विद्यालयले ध्यान दिनुपर्ने उनको जोड थियो ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य प्रतिष्ठानका कार्यसमिति सदस्य सूर्य गिरीले राखेका थिएभने संचालन प्रतिष्ठानका कोषाध्यक्ष अनिल लामिछानेले गरेका थिए । प्रतिष्ठानले विगत २२ वर्षदेखि विद्यार्थीको उज्वल भविष्यको योजनामा टेवा पुराउन शैक्षिक सामाग्री र छात्रवृत्ती प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको March 9, 2021 March 9, 2021 130 Viewed